SSD ရဲ့ အားသာချက်များ ~ The ICT.com.mm Blog
SSD ရဲ့ အားသာချက်များ
အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Laptop တိုင်းနီးပါးမှာ HDD တွေအစား SSD တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အဲ့တာဆို SSD တွေက HDD တွေထက်ဘာတွေပိုကောင်းလို့ပါလိမ့် ??
အက်ဒ်မင် ဒီနေ့မှာတော့ SSD ဆိုတာဘာလဲ၊ SSD ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
SSD ကို Solid State Drive လို့ခေါ်ဝေါ်ပြီး integrated circuit လေးတွေပေါ်မှာ Data တွေကို သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့ Storage Device တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ SSD တွေကို hierarchy of computer storage တွေအတွက် Secondary storage အဖြစ်အသုံးပြုရန် တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Flash Memory တွေနဲ့ ပုံစံတူပါတယ်။ SSD တွေကို Solid State Disk လို့လဲ ခေါ်ကြသလို Solid State Device လို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။ SSD တွေဟာ HDD တွေလို Plate ပြားတွေပေါ်မှာ လည်ပတ်ရတာမဟုတ်ဘဲ Circuit ပြားတွေမှာအလုပ်လုပ်တာကြောင့် Data တွေ ပြောင်းရွှေ့တဲ့အမြန်နှုန်းက HDD တွေထက် သိသိသာသာ မြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SSD တွေက Data တွေကို read/write ပြုလုပ်ရာမှာ HDD တွေလို Power မလိုတာကြောင့် power consumption ပိုင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ SSD တွေဟာ HDD တွေထက် Data တွေကို ကူးပြောင်းရာမှာမြန်ဆန်စေရုံသာမက Window boot တက်နှုန်းနှင့် Software အဝင်အထွက်တွေမှာ သိသိသာသာ မြန်ဆန်ပါတယ်။ အဲ့တာအပြင် SSD တွေက HHD တွေလို Magnetism ကြောင့် Data တွေပျောက်ကုန်တာ ပျက်စီးတာတွေကိုမဖြစ်စေပါဘူး။
SSD တွေကို SanDisk ကနေ 1991 ခုနှစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး SSD တွေရဲ့ သိုလှောင်နိုင်မှုကိုလည်း MB (Megabyte) , GB (Gigabyte) , TB (Terabyte) ဖြင့်တိုင်းတာပါတယ်။ SSD တွေရဲ့ Read/Write speed ကိုလည်း MB/s ဖြင့်တိုင်းတာပါတယ်။
SSD တွေမှာလည်း ပုံစံနှင့်အမြန်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး SATA SSD, PCIe SSD, NVMe SSD, M.2, U.2, mSATA, SATA Express ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင် SSD အကြောင်းကိုသိသင့်သလောက်သိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုလိုဗဟုသုတရဖွယ်ဆောင်းပါးတွေကိုအမြဲတင်ပေးနေမှာဖြစ်တာကြောင့် Myanmar ICT page ကို See First လုပ်ထားပါနော်. . .။
Hardware Information, SSD
Newer Kindle ဆိုတာဘာလဲ?
Older Router တွေ၊ Repeater, Range Extender တွေမှာ တွေ့နေရတဲ့ 2.4GHz and 5GHz အကြောင်း
Gadgets, Promotion, SSD
Teamgroup ရဲ့ Desktop/Laptop memory, Gaming memory, SATA III SSD နဲ့ External SSD ပရိုမိုးရှင်းတွေလာပါပြီ..
မိတ်ဆွေတို့ PC အတွက် လိုအပ်တဲ့ Teamgroup ရဲ့ Desktop/Laptop memory, Gaming...
Gadgets, Mobile, News, Review
Silicon Power – Solid State Disk SSD S55
Golden Power Technologyမှ ပေးပို့လာသော သတင်းလေးကို ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့် Computer၏ Data အချက်အလက်များအား လျှင်မြန်စွာ မော...
သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့ Hardware Information တွေကို အသေးစိတ်ပြပေးမယ့် Speccy
သင့်ကွန်ပြူတာမှာပါရှိတဲ့ Hardware တွေ အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ Speccy ဆိုတဲ့ Freeware ကိုသုံးပါ။ နာမည်ကြီး CCleaner ရဲ့ Develo...